श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, १४ असोज २०७६)
यस कम्पनीले छैटौं न्यूबिज बिजनेश कन्क्लेभ तथा अवार्ड–२०१९ अन्तर्गत बेस्ट म्यानेज्ड फाइनान्स कम्पनीको अवार्ड हात पारेको छ । यस कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा लगानीकर्तालाई आकर्षक लाभांश दिन सफल भएको छ । अघिल्लो आव २०७४/७५ मा १० प्रतिशत (१ दशमलव २३ प्रतिशत बोनस र ८ दशमलव ७७ प्रतिशत नगद) लाभांश वितरण गरेको थियो । गत आवको लाभांश भने कम्पनीले हालसम्म प्रस्ताव गरेको छैन ।
गत आवमा कम्पनीले रू. १३ करोड ३१ लाख ६५ हजार खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आवमा यो नाफा रू. ९ करोड २१ लाख ३ हजार थियो । गत वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा सञ्चालन नाफा बढी भएकाले नाफा बढी भएको हो । अघिल्लो वर्ष रू. १३ करोड ९९ लाख ४८ हजार सञ्चालन नाफा गरेको यस कम्पनीले गत वर्ष रू. १८ करोड ८७ लाख ९७ हजार सञ्चालन नाफा गरेको हो । यस दिन ४ अंकले शेयर मूल्य बढेको हो ।
2019-10-01 - 167 view(s) - abhiyandaily